Ny antony iraisana mahatonga ny fifanakalozana OST Kamboty kamboty
Home Products DataNumen Exchange Recovery Ny antony iraisana mahatonga ny fifanakalozana OST Kamboty kamboty
Antony mahazatra manao Microsoft Exchange OST Kamboty kamboty
Ny fampirimana Exchange offline (.ost) Ny rakitra dia kopia eo an-toerana sy ivelan'ny mailbox ao amin'ny mpizara Exchange. Isaky ny tsy hita maharitra ny boaty mailaka amin'ny mpizara, ny OST antsoina hoe kamboty ny fisie.
Betsaka ny antony mety hahatonga anao Mampifanakalo fampirimana ivelan'ny tsipika (.ost) fisie kamboty. Sokajinay ho sokajy roa izy ireo, izany hoe ny antony ara-pitaovana sy ny antony rindrambaiko.
Isaky ny tsy mahavita mitahiry na mamindra ny angon-drakitra momba ny tahiry Exchange Server (.edb) ny fitaovanao, dia hisy ny loza voajanahary ary hianjera ny mpizara. Tamin'izany fotoana izany, OST ho kamboty ny rakitra. Misy karazany telo ny ankamaroany:
Tsy fahombiazan'ny fitaovana fitahirizana data. Ohatra, raha manana faritra ratsy ny kapila mafy ataonao ary ny tahiry Exchange Server dia voatahiry amin'ireo sehatra ireo. Avy eo angamba tsy afaka mamaky afa-tsy ampahany amin'ny rakitra tahiry ianao. Na ny angona vakinao dia tsy marina ary feno lesoka. Ny fanaovana kolikoly tahirin-kevitra toy izany dia hahatonga ny database tsy ho hita sy ny anao OST kamboty.
Tsy fahombiazan'ny herinaratra na fanakatonana ny mpizara amin'ny fomba mahazatra. Raha sendra misy tsy fahombiazan'ny herinaratra na manakatona ny mpizara Exchange tsy araka ny tokony ho izy ianao rehefa miditra amin'ny tahiry ireo mpizara Exchange dia mety hiteraka fahasimbana sy fitahirizan-tahiry izany. OST kamboty.
Tsy fahombiazana na tsy fahombiazan'ny karatra Controller. Raha misy mpampita cache amin'ny cache ampiasaina amin'ny Exchange Server, ny tsy fahombiazany na ny tsy fahombiazany dia hiteraka ny data cache rehetra lost ary ny kolikoly amin'ny database, mba hanaovana ny OST kamboty.
Betsaka ny teknika hisorohana na hampihenana ny kolikoly momba ny tahiry Exchange Server sy ny OST kamboty noho ny olan'ny fitaovana, ohatra, ny UPS dia afaka mampihena ny olan'ny tsy fahombiazan'ny herinaratra, ary ny fampiasana fitaovana enti-miasa azo antoka dia mety hampihena ny vintana hanimba ny angona.
Exchange koa OST Ny rakitra dia mety ho kamboty noho ny olana mifandray amin'ny rindrambaiko.
Hamao, hanafoana, na handà ny fidirana amin'ny boaty mailaka amin'ny Exchange Server. Raha ny boaty mailaka ao amin'ny Exchange Server mifandraika amin'ny OST Ny rakitra dia voafafa na nalain'ny mpiandraikitra mpizara anao, na ny fidiranao amin'ny boaty mailaka dia lavina. avy eo ny eo an-toerana OST Kamboty ny rakitra ary mila miantehitra ianao DataNumen Exchange Recovery haka ny atin'ny mailbox-nao.
Virus na rindrambaiko maloto hafa. Viriosy maro no hikorontana sy hanimba ny tahiry Exchange Server ary hahatonga azy ireo tsy ho azo ampiasaina, izay hahatonga ny OST kamboty. Soso-kevitra tokoa ny hametraka rindrambaiko anti-virus kalitao ho an'ny rafitry ny Exchange Server.
Ny tsy fahombiazan'ny olombelona. Ny tsy fahombiazan'ny asa ataon'ny olombelona, ​​toy ny famafana diso ireo tahiry, ny fizarazaran-diso ny fitaovana fitahirizana, ny famolavolana diso ny rafitra fiasa, dia hahatonga ny tahirim-pifanakalozan-drakitra Exchange Server tsy hisy, ary noho izany ny OST kamboty.
Amboary ny kamboty OST raki-daza:
Raha ny anao OST Kamboty ny rakitra, mbola azonao atao ny mampiasa ny vokatra azonay DataNumen Exchange Recovery ny avereno ny angona avy amin'ny Exchange orphaned anao OST raki-daza, ka haka indray ny atin'ny boaty mailakao.